नयाँ दैनिक | देश कहिले बन्छ ? देश कहिले बन्छ ? – नयाँ दैनिक
म के भनौँ, के भनौँ भएँ । सत्य कुरा भनौँ उसको मन दुख्थ्यो, नभनौँ आफ्नै मन खुर्सानीको धुँवा लागेजस्तो उकुसमुकुस थियो । फेरि भेट हुन्छ कि हुँदैन..उसका ती शब्दले नराम्ररी चिमोट्न थाले । विदेशबाट बाकसभित्र फर्किएका युवायुवतिका हृदयविदारक दृश्य सम्झिएँ र मनमनै त्यस्तो नहोस् भनेर कामना गरेँ ।
रातको करिब ९ बजेको हुँदो हो । दुई घण्टापछि अर्थात् ११ बजे उसको दक्षिण कोरियाको उडान थियो । उसको निराशा र पीडा नबढोस् ठानेर म योजनावद्ध खिस्स हाँसिदिएँ । तर, हाँसोमा कुनै स्वाद थिएन । म चाहन्थेँ, विदेशीने निर्णय जायज ठान्दै ऊ प्रफुल्ल मनले विदेसियोस् ।
नबोली त सुखै थिएन । ‘पेन किलर’का रुपमा केही शब्दहरुको ‘डोज्’ त दिनै, ताकि त्यही डोजले उसलाई हुत्याएर विदेशसम्म पुर्यावस् । अनि सम्झाएँ, ‘यात्रा गर्ने बेला के यस्तो पिल्पिल् गर्या ! कोरिया गएर महिनाको दुई लाख घर पठाउन पाउँदा त मक्खको पर्नुपर्छ त यार !’
मुख बिगार्दै उसले झ्याप्प अङ्कमाल गर्यो । मानौँ, उसलाई मैले खप्नै नसक्ने पीडादायी खबर सुनाएको थिएँ । आफ्ना आँखाका आँशु पुछ्दै भन्यो, ‘पैसाले प्यास र अत्यास मेटाउँदैन साथी…!’
उसको त्यही अनुहार विदेशबाट आउँदा कस्तो उज्यालो थियो र जाने बेला पानी पार्न लागेको बादलजस्तै देखिन्थ्यो । ऊ तेस्रो पटक कोरिया जाँदै थियो । तर, तीनैचोटी आउँदा ‘अब नेपालमै केही गर्ने हो’ भन्दै उत्साहित हुन्थ्यो र फर्कने बेला यसै भन्न वाध्य थियो । विदेशीने बेला देशको नेतृत्व गर्ने नेताहरुलाई यति घृणा र सराप गर्थ्यो कि उसको सराप लाग्ने भए संसद भवन र आर्यघाट त नेताको शवले भरिनुपर्ने !
अघिल्लो पटकको छुट्टी आउँदा उसले विदेशीनुको कारण बताएको थियो, ‘पढ्दापढ्दै आमा बिरामी हुनुभयो । उपचार गर्दा लाखौँ सकियो । बुहारीको मुख हेरेर मात्रै मर्छु भनेपछि बिहे गरेँ, झनै ऋण थपियो । नातिनातिना चाहियो भन्नुभो, छोरी जन्मिइ । बिरामी आमा, पढ्दै गरेका भाइबहिनी, नयाँ सन्तान र ऋण सम्झेर जागिर खोज्न थालेँ । धेरै नेतालाई समस्या सुनाएँ, सबैले आश्वासन मात्रै दिए । बुझेँ, नेताले झण्डा बोकाउने र अरुसँग भिडाउने मात्रै रहेछन् । अनि अझै ऋण थपेर विदेश गएको हूँ । मैले त पैसाको कारणले मन हुँदाहुँदै पनि पढ्न पाइनँ यार, तपाईँले त पढ्नुस् है ! बरु म पनि सकेको सहयोग गर्छु तपाईँलाई !’
म निशब्द भएँ । मुन्टो हल्लाउँदै सहमति मात्रै जनाएँ । बाटोमा आउँदा कपडा र टाउकोमा लागेको धुलो टकटकाउँदै ऊ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको प्रस्थानतर्फ छिर्यो । आँखाले देख्न छोडेपछि उजाड मन बनाउँदै म फर्किएँ । बाटोमा आफूलाई आफन्तको लास जलाएर फर्केको मलामीजस्तै लागिरहन्थ्यो ।
बाटोका हजारौँ खाल्डाखुल्डी त छल्दै थिएँ तर शक्तिशाली बम पड्काउँदा निस्केको धुवाँजस्तै धुलो कसरी छल्नु ? त्यसैमाथि चोकमा आधा घण्टा जाममा बस्नु परेपछि लाग्यो-यस्तो देशमा बस्नुभन्दा साथी विदेश गएरै ठीक गर्यो !
बल्लबल्ल जाम छिचोलेर पेट्रोल पम्प पुग्दा लेखिएको छ–पेट्रोल छैन । कोठामा पुग्दा भाडा माग्न घरबेटी आएका थिए तर कोठामा धुलो पखाल्ने पानी भने आएको थिएन । घरबेटीलार्ई किस्ता बुझाएर पसलमा जाँदा तरकारी र सामानको मूल्य छोइसक्नु होइन । भात पकाउँदै टिभी खोल्दा समाचार थियो–निर्मला पन्तको हत्यारा अझै पत्ता लागेन !
दिक्क भएर फेरिएको अर्को च्यानलको समाचार थियो–वाइडबडी खरिदमा ६ अर्ब घोटला भएको लेखा समितिको निष्कर्ष । तेस्रो च्यानलमा प्रधानमन्त्रीको फोटो हालेका ज्याकेट विज्ञापन देख्न पाइयो । चौँथो च्यानलमा क्रिश्चियन धर्मको प्रचार गर्दै गरेका उपप्राध्यापक पक्राऊ परेको समाचार थियो । अर्को च्यानलमा नेपाली राजदूत मानव तस्करीमा लागेको बारे चर्चा हुँदै थिए । त्यसपछि रिमोटको रातो स्वीच थिचेर सुत्दै सोचेँ-अनि युवाहरु विदेश नगएर के गरुन् त रु समाचारका च्यानल र पीडादायी भोगाइले देशको चरितार्थ गरेका थिए ।
सुतेँ तर निदाउन सकिनँ । अनि युट्युबबाट अफलाइन सेभ गरेका गीत सुन्न थालेँ । लोकदोहोरी गायक पशुपति शर्माको मर्मस्पर्शी गीत ‘स्वाभिमानी’ दोहोर्याइ, तेहर्याइ बजाएँ ।
स्वतन्त्र छौँ, स्वाभिमान हौँ भन्नि गर्व थियो !
एक महिनामै इन्डियाले औकात देखाइदियो !!
थुइक्क हाम्रो बानी, एक महिनामै बनाइदियो के लाउनी के खानी ? कठ्ठै बरा केही नभका केको स्वाभिमानी ? हामी नेपाली हैनौँ स्वाभिमानी…!
नेताहरुका हाँस्यास्पद भाषण सुनेर वाक्क भएका बेला गीतले झनै दिग्दार बनायो । सुन्दासुन्दै निदाएछु ।
भोलिपल्ट बिहान एउटा भाइको फोनले निद्रा खुल्यो । औपचारिकता लागि सामान्य सम्बोधन गर्दै उसले अपेक्षा राख्यो, ‘दाइ, साह्रै दुःख पाइयो, मलाई नि कतै जागिरमा लगाइदिनु न ! यतिबेला त तपाईँहरुकै सरकार छ !’
उसले ठीकै भनेको थियो । सरकार त थियो तर हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ थिएन । उसलाई निरुत्साहित हुन नदिन मैले भनेँ, ‘जागिर पाउन त्यति सजिलो त छैन भाइ, तर म कोसिस गर्छु । अनि जागिर पाइएला, नपाइएला तर अन्य सहयोग के सकिन्छ म गरौँला !’
मलाई पो थाहा थियो नेताहरुले काम गर्दैनन् भनेर, उसलाई त के थाहा ? उसलाई लाग्दो हो, यो दाइले भनेपछि भैहाल्छ । नेताहरु आफ्नै आफन्त र चाकडी गर्नेलाई मात्रै सहयोग गर्छन् बाबु भनेर उर्जाशील युवालाई किन निराश बनाउनु ठानेर मुखमा आइसकेको कुरा पनि मनभित्रै दबाएँ । तिनका दिमागमा पैसा कमाउने र मस्ती गर्नेबाहेक केही छैन भन्ने मलाई पो थाहा थियो, त्यो अभावमा सङ्घर्षरत युवालाई के थाहा ? बदलिएका जीवनशैली र दृष्टिकोणपछि नेताहरुप्रति घृणा टुसाउँदै गएको कुरा पनि उसलाई भन्ने कुरा भएन । कुनै समस्या लिएर तिनका पैसामा धार लगाउने ‘आरन’मा ज्यू-हजुर गर्दै पुग्न मनले कहिल्यै मानेन । आफूलाई नयाँ राजा ठान्ने र तिनैका ‘चम्चाहरु’सँग हात जोडेर आफ्नो जीवन धान्नु पनि थिएन । बरु यस्तैमा तल्लिन युवायुवतीको दरिद्र मानसिकताबाट मात्रै निराश थिएँ ।
दूध चियाको तल्तल् मेटाउन बाहिर निस्किँदा डोको बोकेर हिँडिरहेकी एउटी महिला देखिइन् । मेरै आमाको उमेरकी ती महिलाले गह्रौँसँग तरकारी बोकेकी थिइन् । उनैले मलाई देखिन् र सोधिहालिन्, ‘बाबु, तरकारी राख्नुहुन्छ र ?’
‘के-के छ र दिदी ?’ जिज्ञासा राखेँ ।
यसले किन्छ कि भन्ने आसले हो वा गह्रौँ भएर हो उनले डोको बिसाइहालिन् । मुख बिगार्दै लामो सुस्केरा हालिन् । सिउँदोको सिन्दुर पसिनासँगै मिस्सिएर चिउँडोबाट तप्तप् चुहिरहेको थियो । निधारमा नाम्लोको डोब छापेझैँ देखिन्थ्यो । पसिनाले शरीरका पूरै कपडा भिजेका थिए । मानौँ, उनी चिसै कपडा लगाएर हिँडेकी हुन् ।
ढाडमा डोकाको डाम चोयाजस्तै देखिन्थ्यो । थाकेर होला, डोको बिसाउँदा थर्थर् कामेकी थिइन् । फाटेको सारीले भित्रको पेटीकोट छोप्न सकेको थिएन । पट्पटी फुटेका खाली खुट्टाले भुइँमा टेक्न पनि डराएझैँ लाग्थ्यो । भारीले बाङ्गिएको मुन्टो बिस्तारै सोझ्याइन् । ठाउँ छोडेको पटुकीको छेउले पसिना पुछिन् । त्यतिबेला मैले आफ्नै आमालाई सम्झिएँ । हजारौँ आमाहरुको मर्म यस्तै थियो । दुई किलो बन्दा, एक किलो स्कुस् र एक किलो काउली जोख्न लगाएँ । आफैँसँग सोधेँ, यिनको दुःख र पीडा कसले बुझ्छ ?
यस्तै पीडाबाट छुटकरा पाउने आशले परिवर्तनको जुनसुकै आन्दोलनमा पीडितहरुले साथ दिँदै आए । राजनीतिक परिवर्तनका नाममा देशका नदीहरुमा यस्तैका रगत खोला बनेर मिसिए । त्रिशुलीमा खसेर फेला नपरेका सवारीझैँ कैयौँ मान्छेहरु राजनीतिकै नाममा हराए । कैयौँ मान्छे जोत्दाजोत्दै खुट्टामा फाली लाग्दाझैँ पीडाले छट्पटिए । जेलनेल र हिरासतका त कुनै हिसाब नै छैनन् । हिसाब तिनको मात्रै आयो, जसलाई रगतको आहाल र छट्पटी खासै देख्नु-भोग्नु परेन । उनीहरुले सिर्फ पस्केको भात खाए र एक वर्षलाई पुग्नेबाहेक अरु बेचिदिए । थोरै बिउ दिए, भकारीका भकारी उत्पादन लिए ।
धेरै मान्छेहरुलाई अहिले पनि आफ्नै जीवन बोझ भैरहेको छ । सास धान्नकै लागि रुँदै-रुँदै विदेशीनेको सङ्ख्या लाखौँ छ । जनजीवीकामा कुनै फेरवदल नआएपछि राजनीतिक परिवर्तनको पनि उस्तो मतलब हुँदो रहेनछ । आकाशजति नै धेरै उपलब्धि भनिएको संविधान त ‘टिनएज्’को युवाले लेखेको प्रेमपत्रजस्तै भएको छ, न आकाशका तारा झर्नेवाला छ, न त उनीबिना ऊ मर्नेवाला छ । ‘यो त सब भन्ने कुरा न हो…!’, रामकृष्ण ढकालले गाएको गीतजस्तै ।
जननेता मदन भण्डारीले एउटा कार्यक्रममा भनेका रहेछन्, ‘एउटा राजाको अन्त्य भयो तर सामन्तवाद अन्त्य भएन भने देशको समस्या उस्तै रहन्छ ।’ उनले भनेझैँ राजतन्त्रको अन्त्य त भयो तर सामन्तवादको अन्त्य भएन र मुलुकको समस्या उस्ताको उस्तै छ । जनताले पीडा पोख्छन्, ‘गणतन्त्र भन्या त नेताले मस्ती गर्ने व्यवस्था पो रहेछ !’
हाम्रा बस्तीमा बाटोको योजना पुग्न चुनाव नै आउनुपर्छ । धारामा पानी ल्याउन राजनीतिक पार्टीका कार्यालय धाउनुपर्छ । रोजगारी पाउन कुनै न कुनै पार्टीको झोला बोक्नुपर्छ । बढुवा र सरुवा हुन पैसा खर्च गर्नुपर्छ ।
चुनाव जिताएर पठाएको जनप्रतिनिधिले बजेट दिन आफ्नै सम्पत्ति दिनुपरेझैँ गर्छन् । काम गरिदिए भने आफ्नै अंश बेचेर गरिदिएझैँ गर्छन् । वर्षभरिमा एउटा वडामा एउटा योजना पारेको देखाएर भाषण गर्दै हिँड्दैमा मुलुकको आमूल परिवर्तनहुन्छ ? अनि, कति सय वर्षभित्रै आउला समाजवाद ?
सरकार र प्रतिपक्ष दुवै उस्तै छन् । जोख्ने हो भने एक औँस पनि फरक नपर्ला । यी सबै देख्नका डाल र सत्ताका काल हुन् भन्दा पनि झुटो नहोला ।
नेपालमा राजनीति गर्नेहरु सफल भए, तर विडम्बना ! देश असफल हुँदै गयो । छिमेकी मुलुकहरु एक महाद्बीपबाट अर्कोमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने भैसके, हामी खुल्ला दिसामुक्त, पूर्ण साक्षरतायुक्त गाउँ नगर घोषणा गर्दैछौँ । यसको भागीदार को हो ? अझ के-के न ठूलो काम गरेझैँ अगुवा-पछुवा लिएर माला लगाउँदै हिँड्न नेताहरु कसरी सकेका होलान् ?
राजनीतिक दललाई सरकार चाहिएको पनि देश चलाउन होइन, पार्टी चलाउन र पैसा कमाउन हो भन्ने तिनका जीवनशैली र आर्जित सम्पत्तिबाट छर्लङ्गै हुन्छ । नत्र छोटै अवधिमा कसरी धेरै कमाइन्छ ? धेरै ठग्दा र लुट्दा मात्रै त्यो सम्भव हुन्छ । गर्भाधान भएको एक महिनामै सकुशल बच्चा कहाँ जन्मेको छ ? राजनीतिक नियुक्तिका लागि घुँडा धसेर किन लाग्छन् र करोडौँको खेल किन हुन्छ ? किनकि ती ठाउँहरु ‘भन्सार’ हुन् । त्यसैले त मान्छेहरु नेताको ‘किर्तन’ गरेर ‘तीर्थ’ जान हतारिन्छन् ।
एक, दुई नेताले जनताको नाममा जे गरिदिए पनि हुने यो कुन व्यवस्थामा पुगियो हामी ? विशुद्ध संसदीय व्यवस्था भए त संसद र राजनीतिक पार्टीहरु शक्तिशाली हुनुपर्ने ! सायद, हामी ‘सामन्ती संसदवाद’मा पुगेका छौँ ।
बोल्सेविक पार्टीका नेता लेनिनले भनेका थिए, ‘बुझ्ने जनता परिवर्तनका संवाहक हुन्, नबुझ्ने भेडा हुन् !’ लेनिनको पालामा त जनता मात्रै भेडा थिए, अहिले त कार्यकर्तासमेत भेडा भए । देशको हालत यस्तो ‘पत्ला’ भैसक्दा पनि अझै नेताको जयजयकार गर्न कसरी मन मानेको होला ?
केही दिनअघि मात्रै स्वर्गारोहण भएका वरिष्ठ न्युरो सर्जन प्रा.डा. उपेन्द्र देवकोटाले एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘कसैको बाआमाले फलानोजस्तो भएस् भनेर आशीर्वाद दिए भने त्यो ‘फलानो’ ठूलो मान्छे हो । त्यसकारणले हजारौँ झुट बोलेर, अरबौँको तस्करी गरेर, ठूला बिल्डिङ बनाएर, हेलिकप्टर र टेलिभिजनमा सयर गरेर ठूलो मान्छे भइँदैन । अहिले हाम्रा बा-आमाले दशैँमा टीका लगाइदिएपछि अहिलेको कुन नेताजस्तो भएस् भनेर आशीर्वाद दिन्छन् ? हाम्रा पालामा बा-आमाले भन्थे- ठूलो भएस्, धेरै पढेस्, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाजस्तो विद्वान र विशेश्वरप्रसाद कोइराला र गणेशमानजस्तो नेता भएस् । अहिले फलानो नेताजस्तो भएस् भन्छन् ? भन्दैनन् । अब त्यस्तो बेला गयो नेपालमा । त्यसकारण ठूलो मान्छेको खडेरी परेको बेलामा हामीले तपाईँहरुबाटै ठूलो मान्छे खोज्दैछौँ ।’ उनले भनेका ती शब्दहरुमा कति धेरै पीडा छचल्किएका छन् ?
छातीमा हात राखेर आफैँलाई सोधौँ, धन दौलतले किर्नाझैँ ढाडिएका यी नेताले जनताको भोको पेटको प्रतिनिधित्व गर्न सक्लान् ? यिनले अहिलेसम्म के काम गरे भनेर हेर्न चाहने हो भने त रकेट चढेर अर्कै ग्रहतिर जानुपर्छ । सोचौँ त, देशमा सांसद र मन्त्रीले बाटो पाइँदैन तर देशको हालत किन यस्तो छ ? यति ‘मनी माइन्डेड्’ नेता भए कि कुन दिनदेखि आफ्नै क्रिया खर्च पनि माग्न बेर छैन । त्यसैले शङ्का उब्जन्छ, कतै हाम्रो देशको पानीमै देश लुट्ने गुण र विशेषता त छैन ?
बाटो बिराएपछि मान्छेले पहिलेको हैसियत र सम्मान गुमाउँछ । बाटो बिराउँदै करोड र अरब कमाएका यी नेताले पनि अब हैसियत गुमाइसकेका त होइनन् ? समृद्धि र सदाचारको उकालो चढ्ने आँट र छाँट जसरी हेरे पनि देखिँदैन । त्यही विकास गर्छौँ भन्ने थोत्रो वाक्य मात्रै दोहोर्याउँदैमा समृद्धि आउनेवाला छैन । आफ्ना भक्तलाई विकासप्रेमी नेता भनेर प्रचार गराएकै भरमा यिनको कार्यक्रममा फूलमाला लिएर पुग्न र ताली बजाउनैपर्छ भन्ने के छ ? यो देश हामी सबैको हो, कथित ठूलाबडाको मात्रै होइन । हामीले अब आफ्नो पसिनाले तिरेको करको हिसाब माग्नुपर्ने बेला आएको छ ।
नेताहरु पतन हुँदै गएपछि राजनीति पनि धन्दाबाहेक केही बन्दो रहेनछ । हरेक पार्टीहरु आफ्नो वर्गका रक्षार्थ बनेका हुन्छन् । आफ्नै नयाँ वर्गको रक्षार्थ पार्टीलाई उभ्याउनु नै नेतृत्वको गहन जिम्मेवारी हो । पार्टीको नाम मात्रै पक्षधरताको आधार होइन । उपभोगवादीको समृद्धि जनताको पक्षमा भएको इतिहास कहीँ कतै छैन ।
त्यसैले, यो देश कसरी बन्छ ? कहिले बन्छ ? कसले बनाउँछ ? कि सधैँको यस्तै हो ? के नेपाल सतिले सरापेकै देश हो त ? यस्ता यक्ष प्रश्नहरुको जवाफ अब नयाँ पुस्ताले दिनुपर्छ ।
अधिकांस नेताले जे गरे, आफ्नै लागि मात्र गरे । देशका लागि थोरै लगानी गरे अनि धेरै मुनाफा लिइसके । अब नयाँ पुस्ताले आफ्ना लागि मात्रै होइन, आउँदो तीन पुस्ताका लागि पनि सोच्नुपर्छ । मरेर लाने केही होइन, बाँचुञ्जेल सबैलाई बाँच्न सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रलाई भुल्नु हुँदैन
। हरेकले परनिर्भरताको मानसिकता त्याग्ने हो भने देश आफैँ र छिट्टै बन्छ । आफैँले आफैँलाई कमजोर नठानौँ र देशको निम्ति जुरुक्कै उठौँ । आ-आफ्नो ठाउँबाट गुलामी होइन, खबरदारी गरौँ ।
होइन भने, हाम्रो र अर्को पुस्ताले पनि डा.विश्वनाथ बरालको गीत गुन्गुनाइरहनेछ–
‘छाडेर काम सारा एक काम रोजिरहेछु,
यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु…..!’
नयाँ दैनिक डटकमका प्रधान सम्पादक नबराज बराल उपन्यास ‘नाम’का समेत लेखक हुन् ।